Budata IrfanView maka Windows
Free Budata maka Windows (3.10 MB)
IrfanView bụ onye na - ekiri onyogho na - akwụghị ụgwọ, ọsịsọ ma dịkwa obere nwere ike ime nnukwu ihe. Enwere ihe zuru oke na onye na-ekiri ihe oyiyi na mmemme a, nke na-anwa ịdị mfe ma baa uru dị ka ọ dị mkpa iji rịọ ma ndị mbido ma ndị ọkachamara notu oge ahụ. IrfanView bụ sọftụwia nke mepụtara karịa ma nwee atụmatụ na-adọrọ mmasị, kama izu ohi echiche na atụmatụ ndị ọzọ eserese eserese. Anyị nwere ike ịsị na IrfanView, nke ndị nweere weebụsaịtị na ndị ọrụ ụlọ gburugburu ụwa họọrọ ogologo oge, bụ otu nime mmemme mmemme kwesịrị ịdị na kọmputa gị.
Ọ bụ ezie na IrfanView bụ onye mbụ na-ekiri ihe nkiri Windows iji kwado ọtụtụ gifs (animated) na ụwa, ọ na-egosi na ọ bụ mmemme nke mbụ na ọhụụ. Notu aka ahụ, mmemme ahụ, nke dị netiti ndị na-ekiri onyonyo izizi nụwa niile na-akwado ọtụtụ TIFs na ọtụtụ ICO, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ọbụlagodi na ọrụ ndị kacha sie ike yana ọtụtụ atụmatụ ya.
The dị ịrịba ama interface nke usoro ihe omume bụ nezie mfe maka ọhụrụ ọrụ. Nghọta, ị nwere ike ịchọta bọtịnụ ịchọrọ ebe ọ bụla ị na-achọ. Site na nkwado Thumbnails, ị nwere ike ịhụ folda dịka thumbnails. Otu nime ihe ndị na-adọrọ mmasị bụ nhọrọ Reopen, nke na - enye gị ohere imeghe eserese ị mere ngbanwe site na diski ahụ, ma ọ bụrụ na ịchebeghi ha.
Akụrụngwa ahụ na-abịa na ụdị ọhụrụ IrfanView 4, yana ngwaọrụ Google abụọ arụnyere noge nrụnye. Ọ bụrụ nịchọrọ, ị nwere ike ịwụnye nrụnye ndị a. Ihe omume a na enye gi ohere imeghe onyonyo ma degharia ha. I nwere ike belata ma bee foto na usoro ihe omume nke na-akwado nke a mma na ọtụtụ media formats. Nwere ike ịgbakwunye ogbe mgbanwe, tinye, nkọ ma ọ bụ ghara ịma mmetụta, ike panoramas, na mezie agba mfe na ụdịdị.
Usoro ihe omume ahụ gụnyekwara nkwado nkwụnye maka ọtụtụ onyonyo, vidiyo na ụdị ọdịyo. IrfanView 4, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu na nkwado ya maka ụdị mgbasa ozi ọhụụ dịka MP3, AVI, Audio CD na WMA, ka na-ekwusi ike ịdị mfe ya na ịdị mfe dịka interface. Uzo mkpirisi IrfanView ewerela ọnọdụ ya na nsụgharị ọhụrụ a maka gị iji ihe nchọgharị na-agagharị site na desktọọpụ gị. Nwere ike iji ihe nchọgharị a mee ihe oyiyi gị ngwa ngwa.
Formdị faịlụ ndị IrfanView kwadoro: JPG, GIF, BMP, TIF, PNG, LWF, PCX, TGA, PCD, RAS, RLE, DIB, ICO, CUR, ANI, WMF, EMF, PPM, PGM, PBM, IFF, PSD, CPT, CLP, EPS, CAM, G3, WAV, MID, RMI, AIF, MP3, WMA.
Dị mkpa! Younwere ike ibudata faịlụ ntọala faịlụ achọrọ iji usoro ihe omume na English site na ịpị ebe a.
Nha faịlụ: 3.10 MB
Mmepụta: Irfan Skiljan
Ekele maka FastStone Photo Resizer, ị nwere ike gbanwee usoro onyonyo gị nuju, ị nwekwara ike tinye...
Adobe Photoshop Elements bụ mmemme onyonyo na -aga nke ọma nke a na -enye dị ka ụdị Photoshop dị...
IrfanView bụ onye na - ekiri onyogho na - akwụghị ụgwọ, ọsịsọ ma dịkwa obere nwere ike ime nnukwu...
PhotoScape bụ mmemme edezi foto bụ nefu maka Windows 7 na kọmpụta dị elu. Ọ bụ nchịkọta akụkọ ihe...
Mkpokọta Watermark bụ mmemme akara mmiri iji gbochie foto nkeonwe ị na -ekesa na ịntanetị ka e...
Mmemme JPEGmini so na ngwa nwere ike ibelata nha foto na faịlụ foto na kọmpụta nke ndị ọrụ Windows,...
Kwa ụbọchị anyị na -ahụ na Minecraft abụghị naanị egwuregwu ma ọ na -abịarukwu nso na nka. Oge a,...
ImageMagick bụ onye ndezi onyonyo maka idezi onyonyo dijitalụ, imepụta onyonyo bitmap ma ọ bụ...
Adobe Dimension bụ mmemme maka imepụta foto 3D dị adị maka ngwaahịa na imewe ngwugwu. Site na Adobe...
Usoro mmemme zoro ezo bụ mmemme efu nke akwadoro maka ndị chọrọ iwere nseta ihuenyo nke kọmpụta ha...
Rịba ama: Ewepula njikọ nbudata nihi na Google chọpụtara faịlụ nrụnye mmemme ahụ ka ọ bụrụ malware....
Funny Photo Maker bụ ngwa bara uru na ntụkwasị obi nke emere iji hazie foto gị yana mmetụta pụrụ...